Raspberry Pi OS: kuburitswa kutsva nekutsigirwa kunatsiridza | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Raspberry Pi Foundation yakaburitsa vhezheni itsva yeanoshanda system Raspberry Pi OS (aimbove Raspbian). Uku kugoverwa kweGNU / Linux kwakanyatsogadzirirwa maSBC aya, uye ikozvino kunouya nekumwe kunatsurudzwa. Semuenzaniso, ivo vaisa basa rakawanda mune yavo odhiyo sisitimu uye zvakare kugadzirisa rutsigiro rwekudhinda.
Iyo vhezheni yandiri kureva nezvayo ndeye Raspberry Pi OS pane yayo 1.4 version, chii chaungaite izvozvi? kurodha pasi kubva pawebhusaiti yepamutemo kuti ukwanise kuiisa pane yako SD kadhi uye uite kuti iite pane yako Raspberry Pi bhodhi. Asi kutanga kwezvose, iwe unofanirwa kuziva zvese zvakadzama uye nhau dzeiyi nyowani kuburitswa ...
Rasbperry Pi OS ikozvino inouya nekuvandudza kukuru maererano neayo odhiyo sisitimu. Isati yashandisa iyo ALSA odhiyo dhiyo kune yayo ruzha stack, pachinzvimbo izvozvi zvachinjirwa ku PulseAudio. Iko shanduko inogonesa huwandu hwedzimwe maficha kuti agoneswe, senge rutsigiro rwekunze-kwe-iro-bhokisi zvishandiso zvine Bluetooth yekubatanidza.
Tsigiro inowedzerwawo ridza ruzha kubva kwakasiyana masosi panguva imwe chete, kunyanya kana uchishandisa HDMI zvinobuda. Iwe unogona kunyange kushandura ruzha kubva kuHDMI kuenda kuUSB kadhi rezwi apo vhidhiyo iri kutamba, pamwe nekupa nzira yekugadzirisa kupinza uye kuburitsa kwemadhizaini odhiyo zviri nyore.
Zvakare, izvozvi zvave kuita gonesa mafaera emidziyo yako yeBluetooth, senge HSP (HeadSetProfile) kushandisa maikorofoni uye mahedhifoni panguva imwe chete, pamwe neA2DP (Advanced Audio Distribution Profile) inodzivirira mic.
Asi ivo havana kungo tarisa pane Raspberry Pi OS kuvandudza mune ruzha, kune zvekare maererano nerutsigiro rwe maprinta. Iye zvino iyi distro inouya neCUPS seye yekudhinda serer uye system-gadziriso-printa seyakasarudzika yekumisikidza interface.
Zvimwe zvekuvandudza mune iyi nyowani vhezheni yeRaspberry Pi OS zvine chekuita ne pre-akaisa zvirongwaSenge Orca screen muverengi, Chromium browser yakagadziridzwa kuita v84, Thonny Python IDE kusvika 3.3, Adobe Flash Player kusvika 32.0.0.453, Linux kernel 5.4.79 LTS, nezvimwe. Uye pasina kukanganwa kumwe kugadzirisa, uye kugadzirisa kwemabhodhi matsva eSBC ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Raspberry Pi OS: kuburitswa kutsva nekuvandudzwa kwekuteerera uye kudhinda rutsigiro